६ महिनादेखि प्रिन्सिपलबाटै किशोरी बलात्कृत ! – Everest Dainik – News from Nepal
६ महिनादेखि प्रिन्सिपलबाटै किशोरी बलात्कृत !
धरान, साउन २८ । धरान उपमहानगरपालिका-५ साउनेस्थित मदर इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल झमक बस्नेतले हाडनाताकी एक किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गर्दै आएको घटना सार्वजनिक भएको छ । कक्षा १२ मा पढ्दै आएकी किशोरीलाई बस्नेतले ६ महिनादेखि जबर्जस्ती करणी गर्दै आएका हुन् ।
घटना सार्वजनिक भएपछि बस्नेत फरार छन् । आफूलाई कक्षा ११ मा पढ्दादेखि नै कसैलाई भने हत्या गर्ने धम्की दिएर बस्नेतले जबर्जस्ती गर्दै आएको किशोरीको भनाइ छ । बस्नेतले गएको फागुन २५ गते पहिलोपटक किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेका थिए ।
त्यसपछि हल्ला गरे परिवारै सिध्याइदिने धम्की दिँदै उनले निरन्तर करणी गर्दै आएका पीडितको भनाइ छ । आफूमाथि बस्नेतले डरधम्की देखाउँदै निरन्तर करणी गर्न थालेपछि किशोरीले अभिभावकलाई आफ्नो पीडा सुनाएकी हुन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
पीडित परिवारले गएको असार १० गते इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा बस्नेतविरुद्ध उजुरी गरेका थिए । आफूविरुद्ध उजुरी परेको थाहा पाएपछि बस्नेतले उजुरी फिर्ता लिएर घरमै मिलाउन दबाब दिए । प्रहरीले समेत बस्नेतलाई पक्राउ नगरेपछि पीडित परिवारले न्याय माग्दै महिला सञ्जाल धरानमा गएको असार १८ गते निवेदन दिएका छन् । सञ्जालकी अध्यक्ष सविता राईले बस्नेतमाथि कारबाहीका लागि पहल भइरहेको बताइन् ।
धरान उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति, इलाका प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा आइतबार पीडित परिवारले दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
ट्याग्स: balatkar, dharan